तेस्रो आँखा विशेष – Page 12 – Tesro Ankha
दीपेन्द्र राई करुवाका लागि सङ्खुवासभा, ढाकाटोपीका लागि पाल्पाले प्रसिद्धि पाएजस्तै गरा–गरा ‘ट्यारेस’ का लागि काभ्रेपलाञ्चोकको बल्थली चर्चित मानिन्छ । काठमाडौंदेखि ४० किलोमिटर दूरीमा रहेको बल्थलीको ‘ट्यारेस’ रूसपछिको आकर्षक मानिने बल्थली माउन्टेन रिसोर्टका सचिन हुमागाईंले जानकारी गराए । बल्थलीको ख्याकु फाँटका ‘ट्यारेस’ त्यत्तिकै लोभलाग्दो देखिन्छ । ‘ट्यारेस’ हेर्न बल्थली पुग्ने आन्तरिक तथा ब...
दीपेन्द्र राई ‘दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस खोटाङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पढ्दै थिएँ,’ संगीतकार शान्तिराम राईले अतीत सम्झे, ‘क्याम्पसले सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको थियो । म तेस्रो भएँ । यो संवत् २०४४ सालको कुरा हो ।’ त्यसको वर्ष दिनपछि संगीतकार राई काठमाडौं पसे । त्यसताका रेडियो नेपालमा चौतारी, रोदीजस्ता सांगीतिक कार्यक्रम लोकप्रिय थियो । उनलाई उल्लिखित कार्यक्रममार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन...
झकेन्द्र घर्तीमगर नेपाल सरकारले ९ जेठ २०७४ मा बसेको मन्त्रिरिषद् बैठकबाट कामी बुढामगरलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेको छ । सहिद घोषणाको समाचार आएपछि कामी बुढा को थिए ? कसरी सहिद भए ? किन ६४ वर्षपछि आएर सहिद घोषणा गरियो ? जस्ता प्रश्न र चर्चा एकैसाथ उठेको छ । को थिए कामी बुढा ? रुकुम चौखावाङ–८ हालको नयाँ संघीय संरचनाअनुसार मुसीकोट नगरपालिका वडा नं १० मा पर्ने खर्सुपानी भन्ने ठाउँमा बुवा ख...
दीपेन्द्र राई नेपालको सबैभन्दा उचाइमा रहेको सदरमुकाम कुन हो ? तपाईंहरूलाई थाहा छ ? छैन भने नेपालको सबैभन्दा उचाइमा रहेको सदरमुकामबारे जानकारी गराउँदै छु । ७५ जिल्लामा विभाजितमध्ये हुम्ला पनि एक हो । हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट हो । सिमकोटलाई नेपालको सबैभन्दा उचाइमा रहेको सदरमुकाम भनिन्छ । सिमकोट समुद्र सतहबाट २,९४५ मिटरमा उचाइमा रहेको छ । सिमकोटलाई चारैतिर डाँडाकाँडाले घेरेको छ । यहाँ ह...
भनिन्छ– सुखमा नमातिनु र दुःखमा नआत्तिनु । जस्तोसुकै दुःखमा पनि धैर्य, साहस र संघर्षसाथ अगाडि बढे सफलता प्राप्त हुन्छ । यस्तै, एक उदाहरण बनेकी छन्– उद्घोषिका याङ्जोम शेर्पा । कुनै समय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाएर रोएकी याङ्जोम हिजोआज व्यस्त र महँगो उद्घोषिका बन्न सफल भएकी छन् । एनटीभी र एनटीभी प्लसमा दुई वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्टेज कार्यक्रम सञ्चालनमा जमेकी छन् । शेर्पा समुदायकै पहिलो ...
दीपेन्द्र राई सुनसरी, धरानका सुधाकर घलेले सैनिक सेवामा लागेर भविष्य बनाउँला भनेर कहिल्यै सोचेका थिएनन् । तर, कहिल्यै नसोचेको सेवामा प्रवेश गरेर घलेले भविष्य उज्यालो बनाउँदै छन् । एमबीबीएस पढ्न अमेरिका पुगेका उनी पढाइ पूरा गरेपछि अमेरिकी सेनामा प्रवेश गरे । अमेरिकाको जोहनसोन एन्ड वेल्स विश्वविद्यालयमा ‘ग्लोबल बिजनेस लिडरसिप’ अन्तर्गत वित्त व्यवस्थापनमा एमबीए पूरा गरेपछि उनी सेनामा प्रवेश गरे...
काठमाडौँ । संविधानसभा पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विविध कार्यक्रम गरी मुलुकभरि विविध कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस २०७४ मनाइँदै छ । झन्डै अढार्इ सय वर्षको इतिहास बोकेको शाहवंशीय राजतन्त्र बिदाइ गर्दै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । लामो समय जरा गाडेर बसेको राजतन्त्र बिदाइ गरी गणतन्त्र स्थापना शान्तिपूर्ण र...
१२ लाख राई समुदायको उदाहरणीय व्यक्ति
दीपेन्द्र राई काठमाडौँ उपत्यका साकेलामय भएको छ । गत वैशाख २७ गते ललितपुरको किरातवनमा विधिवत् पूजाआजा गरी किरात राईको महान् चाड उँभौली (वैशाखे पूर्णिमा) सुरु भएको हो । यो चाड कतै महिना दिन त कतै १५ दिनसम्म धूमधामसँग मनाइन्छ । यो चाड काठमाडौँ उपत्यकाका पनि १५ दिनसम्म हर्षाेल्लाससहित मनाउने गरिन्छ । किरात राई यायोक्खा, काठमाडौं जिल्ला कार्यसमिति सहसचिवसमेत रहेका उनी १५ दिनसम्म त्यत्तिकै व्य...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अदालत हाजिर भएकी छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शुक्रवार साँझ अदालत हाजिर भई अदालती काम थालेको सर्वोच्च अदालत सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए । प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा विषयलाई लिएर प्रधानन्यायधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मर्मविपरित भएको भन्द...